Shiinaha Shaashad dhuleedka bannaanka u-waara ee soo-saarka sagxadda dibadda iyo warshad | Bamboo Dahab ah
Badeecada bamboo REBO waxay ka samaysan tahay fiilooyin dabiici ah oo bamboo ah, iyada oo loo marayo 2700 tan oo ah cadaadis kulul iyo geeddi-socodka kaarboon, taas oo ka dhigaysa guddiga mid aad u adag, adag, oo xoog leh. Decking-ka Bamboo wuxuu ku soo badanayaa suuqyada caalamiga ah. Dusha sare waa muuqaal yar oo mowjado ah oo leh dabaq fidsan ama jeexjeexan.
Bamboo banaanka ah waa bamboo dib loo habeeyay. Alaabta ceyriinka ah ee sagxadda bamboo culus waa banbooni la cusbooneysiin karo, taas oo deegaanka u wanaagsan. Gogosha bamboo culus ayaa guud ahaan lagu daaweeyaa heerkulka kuleylka badan iyo cadaadiska sare. Sidaa darteed, cufnaanta bannaanka culus ee bamboo ayaa aad uga badan kan dhulka bamboo caadi ah iyo sagxadda qoryaha.
Joogtayntu waa mid ka mid ah ujeeddooyinka REBO, taasoo ka dhigaysa REBO Bamboo inay run ka dhigato.
Waxaa jira arrimo badan oo dad aad iyo aad u tiro badani u doortaan alaabada baasaboorka dunta leh ee dhismaha iyo qurxinta. Astaamaha ugu muhiimsan ee sagxadda bannaanka waa sida hoos ku xusan:
1) Warping majiro, dildilaac maleh, iska caabin warqad ah.
2) Biyaha u adkaysta, looxyada bamboo ee REBO waxaa lagu tijaabiyaa xaaladaha biyaha waxaana la sameeyaa Fasalka 4aad, oo ku habboon dibedda, marka lala xiriiro dhulka iyo biyaha macaan.
3) Caaryo la’aan, cayayaan cayayaan ma leh.
4) Adkaysi u leh cimilada daran iyo cimilada kaladuwan
5) Bay'ada u roon, badbaadinta khayraadka keynta.
Badeecada bamboo REBO waxay ka samaysan tahay fiilooyin dabiici ah oo bamboo ah, iyada oo loo marayo 2700 tan oo ah cadaadis kulul iyo geeddi-socodka kaarboon, taas oo ka dhigaysa guddiga mid aad u adag, adag, oo xoog leh. Decking-ka Bamboo wuxuu ku soo badanayaa suuqyada caalamiga ah. Dusha sare waa muuqaal yar oo mowjado ah oo leh dabaq fidsan ama jeexjeexan. Dhererka caadiga waa 1860mm, ballaca caadiga ah waa140mm, dhumucdiisuna waa 18mm. Dabcan, dhumucdu waxay noqon kartaa 20mm iyo ka badan. Waxay kuxirantahay codsiyada macaamiisha.
Hore: E1 Eurpean caadiga ah sagxadda aaladda u-roon e-saaxiibtinimada bannaanka
Xiga: Cimilada u adkeysata E1 looxyada caadiga ah ee gogosha